မိက္ခာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / မိက္ခာ
1:1 The word of the Lord that came to Micah the Moreshethite, in the days of Jotham, အာခတ်, ဟေဇကိ, ယုဒရှင်ဘုရင်, which he saw about Samaria and Jerusalem.
1:2 လူမျိုးအပေါင်းတို့, နားထောင်. And may the earth and its fullness pay attention. And may the Lord God beawitness to you, the Lord from his holy temple.
1:3 ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, ထာဝရဘုရားသည်မိမိအရပ်မှထွက်သွားပါလိမ့်မယ်. And he will descend, and he will trample over the high places of the earth.
1:14 ဒီအတွက်ကြောင့်, she will send emissaries to the inheritance of Gath: the house of Lying in order to deceive the kings of Israel.
1:15 သို့သော်ငြားလည်း, I will lead an heir to you, who dwell in Mareshah: the glory of Israel will reach all the way to Adullam.
2:1 အချည်းနှီးသောအရာတို့ကိုကြံစည်သူကိုသင့်အိပ်ရာ၌ဒုစရိုက်ကိုအလုပ်လုပ်သောသူသည်သင်မင်္ဂလာရှိ၏. နံနက်ယံအလငျး၌, သူတို့ကဆောင်ရွက်ရန်, သူတို့၏လက်သညျဘုရားသခငျဆန့်ကျင်သောကွောငျ့.
2:2 ထိုသူတို့ကလယ်ကွင်းဆန္ဒရှိပြီအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်သူတို့ကိုယူကြပြီ, သူတို့ကအိမ်တွေကိုခိုးယူခဲ့ကြ. ထိုသူတို့ကတစ်ဦးလူနှင့်မိမိအိမ်သူအိမ်သားတဘက်၌မမှန်သောစွပ်စွဲကြပြီ, လူတနှင့်သူ၏အမွေဥစ္စာကို.
2:3 ဒီအတွက်ကြောင့်, အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏: အကယ်, ငါသည်ဤမိသားစုဆန့်ကျင်သည့်မကောင်းသောအကြံကိုကြံ, ရာမှသင်သည်သင်၏လည်ပင်းကွာခိုးယူမည်မဟုတ်. တဖန်သင်တို့ထောင်လွှားခြင်း၌မသွားမလာလိမ့်မယ်, ဒီအများဆုံးမတရားသောသူသည်အချိန်စျသောကွောငျ့.
2:4 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, ဥပမာသငျသညျအကွောငျးကိုတက်ယူကြလိမ့်မည်, တစ်ဦးသီချင်းချိုနှင့်အတူသီဆိုကြလိမ့်မည်, ဟုဆို: "ကျနော်တို့ depopulation အားဖြင့်ပျက်စီးခဲ့ပြီ။ " ငါ၏လူတို့၏ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲခဲ့. ဘယ်လိုသူသည်ငါ့ထံမ​​ှထုတ်ယူနိုင်ပါသည်, သူပြန်လှည့်စေခြင်းငှါလာသောအခါ, ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကိုက်ဖြတ်စေခြင်းငှါ, ရသောသူမူကား?
2:5 ဒီအတွက်ကြောင့်, သင်တို့အဘို့ထာဝရဘုရား၏ပရိသတ်၌ကံကြမ္မာ၏ကြိုးမရှိသတ္တုများပုံသွန်းရှိလိမ့်မည်.
2:8 ဒါပေမယ့်, ဆန့်ကျင်ရန်, my people have risen up in opposition. You have lifted the cover from the undergarment, and those who passed by harmlessly, you have converted into war.
2:12 I will gather together inacongregation all of you, ယာကုပ်အမျိုးကို. I will lead together as one, ဣသရေလအမျိုး၏အကြွင်းအကျန်ကို. I will set them together likeaflock in the fold, likeasheep in the midst of the sheep pen. They will causeatumult before the multitude of men.
3:1 ထိုအခါငါကပြောသည်: နားထောင်, leaders of Jacob and chiefs of the house of Israel. Does it not belong to you to know judgment,
3:6 ဒီအတွက်ကြောင့်, night will be yours for vision, and darkness yours for divination, and the sun will meet with death over the prophets, and the day will be darkened over them.
3:8 သို့သော်ငြားလည်း, truly I have been filled with the strength of the Spirit of the Lord, with judgment and virtue, in order to announce to Jacob his wickedness and to Israel his sin.
3:9 ဒီနားထောငျ, leaders of the house of Jacob and judges of the house of Israel, you who abominate judgment and who pervert all that is right.
3:11 Her leaders have judged for tributes, and her priests have taught for payment, and her prophets divined for money. And they leaned upon the Lord, ဟုဆို: “Is not the Lord in our midst? No disaster will overcome us.”
3:12 ဒီအတွက်ကြောင့်, မင်းကြောင့််, Zion will be plowed under likeafield, and Jerusalem will become likeapile of stones, and the mountain of the temple like the high places of the forests.
4:1 နှင့်ဤဖြစ်ရကြလိမ့်မည်: နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလများတွင်, the mountain of the house of the Lord will be prepared at the top of the mountains and high above the hills. And the people will flow to it.
4:2 And many nations will hurry, and will say: "လာ, let us ascend to the mountain of the Lord and to the house of the God of Jacob. And he will teach us about his ways, အကြှနျုပျတို့သညျလမျးခရီး၌ကျင်လည်လိမ့်မည်။ "ပညတ်တရားသည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်ကထွက်သွားပါလိမ့်မယ်, and the word of the Lord from Jerusalem.
4:5 For all people will walk, each one in the name of his god. But we will walk in the name of the Lord our God, ထာဝရအမြဲတမ်း.
4:6 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, I will gather together the lame. And I will recover her whom I had rejected, and her whom I had afflicted.
4:8 ပြီးတော့သင်, cloudy tower of the flock of the daughter of Zion, even to you it will come. And the first power will arrive, the kingdom to the daughter of Jerusalem.
4:9 အခုတော့, why have you come together in grief? Is there notaking in you, or has your counselor gone away? For sorrow has overtaken you, like the pain of giving birth.
4:10 Be grieved and overwhelmed, ဇိအုန်သတို့သမီး, ကလေးမွေးဖွားပေးခြင်းမိန်းမကဲ့သို့. For now you must depart from the city and dwell in the countryside, and you will approach even to Babylon. There you will be delivered. There the Lord will redeem you from the hand of your adversaries.
4:11 And now many peoples have been gathered together against you, နှင့်သူတို့ပြော, “Let her be stoned and let our eyes gaze upon Zion.”
4:13 Rise and thresh, ဇိအုန်သတို့သမီး. For I will set your horn like iron, and I will set your hoofs like brass. And you will shatter many peoples, and you will immolate their spoils for the Lord, and their strength for the Lord of the whole earth.
5:1 ယခုတွင်သင်သည်ပျက်စီးလိမ့်မည်, ထားပြ၏သမီးကိုသငျသညျ. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပိတ်ဆို့ထားပြီ, တစ်ဦးနှင်တံနှင့်သူတို့သည်ဣသရေလတရားသူကြီးများ၏မေးရိုးဒဏ်ခတ်မည်.
5:2 ပြီးတော့သင်, ဗက်လင် Ephrata, ယုဒအမျိုးထောင်ပေါင်းများစွာတို့တွင်အအနည်းငယ်ကိုတဝတည်းဖြစ်ကြ၏. မှသငျထှကျသူသည်ဣသရေလအမျိုး၌အစိုးရသောမင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်သူကိုသွားပါလိမ့်မယ်, နှင့်သူ၏ဆင်းသက်ရာအရပျရှေ့ဦးစွာ မှစ. သတ်မှတ်ထားပါတယ်, ထာဝရလက်ထက် မှစ..
5:3 ဒီအတွက်ကြောင့်, သူထိုသူတို့အဘို့ပေးသွားမှာပါ, ပင်သူမကအဘယ်သူသည်သူ့ကိုသမုတ်သောကလေးမွေးဖွားပေးသောအတွက်အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်. နှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများ၏အကြွင်းအကျန်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ကူးပြောင်းလိမ့်မည်.
5:4 ထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရား၏အစွမ်းသတ္တိကိုပေါ်၌မြဲမြံစွာရပ်တည်ကျွေးမွေးမည်, ထိုသခင်၏နာမတော် sublime ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီ. ထိုသူတို့ကူးပြောင်းလိမ့်မည်, ယခုသူသည်ဝါကြွားကြလိမ့်မည်, ပင်ကိုမြေကြီးစွန်းမှ.
5:8 And there will bearemnant of Jacob within the Gentiles, in the midst of many peoples, likealion among the beasts of the forests, and likeayoung lion among the flocks of sheep, အဘယ်သူသည်, when he will pass through and trample down and seize, there is none who can rescue.
5:10 ထိုသို့ထိုကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ: I will take away your horses from your midst, and I will utterly ruin your four-horse chariots.
6:1 သခင်ဘုရားသည်အဘယ်သို့မိန့် Listen: မြင့်တက်, တောင်ရိုးဆန့်ကျင်တရားစီရင်ဆန့်ကျင်ဘက်, နှင့်တောင်ကုန်းသင်၏စကားသံကိုနားထောငျကွပါစို့.
6:2 တောင်ရိုးသခင်ဘုရားတရားကိုနားထောင်ကြကုန်အံ့, မြေကြီးသားအမျိုးမျိုးခိုင်ခံ့သောအမြစ်. သခင်ဘုရား၏တရားသည်မိမိလူမျိုးနှင့်ဖြစ်ပါသည်, သူသည်ဣသရေလအမျိုးနှင့်တကွစီရင်တော်မူခြင်းသို့ဝငျပါမညျ.
6:3 ငါ၏လူ, ငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုကြပြီ, သို့မဟုတ်ဘယ်လိုငါသည်သင်တို့ကို assailed ပြီ? ငါ့အားတုန့်ပြန်.
6:4 အဲဂုတ္တုပြည်မှကယ်ပို့ဆောင်ပြီများအတွက်, ငါကျွန်၏အိမျတျောထံမှသင်တို့လွတ်မြောက်လာ, ငါသည်လည်းသင်တို့၏မကျြနှာကိုမောရှေရှေ့၌စေ​​လွှတ်တော်မူ, နှင့်အာရုန်, မိရိအံ.
6:5 ငါ၏လူ, remember, ကျွန်တော်သင့်ကိုမေးမယ်, what Balak the king of Moab planned, and how Balaam the son of Beor responded to him, from Shittim even to Gilgal, so that you may know the justice of the Lord.
6:6 ထိုက်တန်ဘယျအရာအရာငါသည်ထာဝရဘုရားအားပူဇော်စေခြင်းငှါ,, ငါသည်မြင့်သောဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဒူးကွေးအဖြစ်? အဘယ်သို့ငါသူ့ကိုမှမီးရှို့ပူဇော်ရနိုင်, တနှစ်အရွယ်၌နွားသငယ်?
6:7 သခင်ဘုရားသည်သိုးထီးထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှစ်သက်ဖြစ်ပါ့, သို့မဟုတ်အဆီအများအပြားထောင်ပေါင်းများစွာသူဆိတ်နှင့်အတူ? ငါဘယ်လိုသောကွောငျ့အကြှနျုပျကိုမကောင်းသောလုပ်ရပ်ငါ၏သားဦးအရှုံးမပေးနိုင်, သောကွောငျ့အကြှနျုပျဝိညာဉျသ၏အပြစ်တရား၏အကြှနျုပျဝမျး၏အသီးကို?
6:8 ငါသည်သင်တို့ကိုမှထုတ်ဖေါ်ပါလိမ့်မယ်, အချင်းလူ, အဘယျအကောငျး၏, နှင့်သခင်သည်သင်တို့ထံကလိုအပ်သောအရာကို, တရားစီရင်နှင့်ပြုမူဖို့ဘယ်လို, ကရုဏာကိုချစ်ရန်, နှင့်သင်၏ဘုရားသခင်နှင့်အတူဂရုတစိုက်လမ်းလျှောက်ဖို့.
6:10 သို့သော်ငြားလည်း, there isafire in the house of the impious, the treasury of iniquity, andasmall measure, filled with wrath.
6:12 ဒီအားဖြင့်, her wealthy have been filled with iniquity, and her inhabitants have spoken lies, and their tongue was deceitful in their mouth.
6:13 And I, ထိုကွောငျ့, began to strike you with perdition because of your sins.
7:1 ငါ့ကိုမင်္ဂလာရှိ၏, for I have become just like one who gleans the clusters of the vintage in autumn. There is no cluster of grapes to consume; my soul desired figs out of season.
7:8 သငျသညျ, my enemy, should not rejoice over me because I have fallen. ငါထဦးမည်, when I sit in darkness. The Lord is my light.
7:17 They will lick the dust like serpents, နှင့်, like the creeping things of the earth, they will be disturbed in their houses. They will dread the Lord our God, and they will fear you.